အောက်တိုဘာလ 2017 | 53 ၏စာမျက်နှာ 105 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » အောက်တိုဘာလ (စာမျက်နှာ 53)
ကင်မရာအော်ပရေတာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဂျက်ဆင်, က MS Duration: 10 / 19-10 / 22 လစာ 10 / 17 / 17 10 / 19 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကိုရှာအလုပ်က NYC အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးမပေး တစ်ဦးအဖြစ်မှန်စီးရီးအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့တစ်ကင်မရာအော်ပရေတာ။ အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တစ်ဦးမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုအောက်ပါသက်သာခံစားရပြီးအစာရှောင်ခြင်းပွေးညီအတွက်ရှင်သန်သင့်တယ် ...
ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် / ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်
ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် / ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် San Diego မှ,, CA Duration: 1 နေ့က - 10 / 31 လစာ 10 / 17 / 17 10 / 31 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျနော်တို့လက်ရှိရှာဖွေနေတဲ့အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးမပေး တစ်ဦးရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် San Diego မှကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Professional ကမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးတိုတောင်းသောပရိုဖိုင်းကိုရိုက်ကူးရန်။ ကျနော်တို့၏ကွန်ယက်အသုံးချ ...
အသံရောနှောကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်အမ်း Arbore, MI Duration:2ရက်, 10 / 20 / 10 17 / 17 / 10 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အပြည့်အဝကိရိယာအစုံနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အအသံရောနှောအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted 20 / 17 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘစတင်သည် အင်တာဗျူးနှင့် b-လိပ်သည်။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်တစ်ဦးစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအတွက်ယခု Subscribe? >> ပိုအတွက် Sign ကျေးဇူးပြု.
ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် / ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Las Vegas မှာ, NV Duration: 1 နေ့က - 10 / 21 လစာ 10 / 17 / 17 10 / 21 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျနော်တို့လက်ရှိရှာဖွေနေတဲ့အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးမပေး တစ်ဦးရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်ဝါရှင်တန်, Utah အတွက် "Cyborg" ပေါ်တွင်အတိုပရိုဖိုင်းကိုရိုက်ကူးရန်။ ကျနော်တို့ကဗီဒီယိုဂျာနယ်လစ်များကွန်ယက်အသုံးချ ...
အသံရောနှောကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်စန်း Juan, Puerto Rico Duration: 10 / 19 - 10 / 28 / 11 အပေါ် posted6/ 11 OR9/ 10-17 / 17 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘပေးမ 10 / 19 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ထိုင်ချအင်တာဗျူးတွေနဲ့ B-Roll များအတွက်စန်း Juan ဧရိယာမှဒေသခံတစ်ဦးအသံရောနှောရှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်။ ရက်စွဲများရိုက်ကိုယ်ပိုင်ဂီယာ (ရောနှော / အသံဖမ်း, ကြိုးမဲ့ lavs, စန်း) ဖြစ်ကြောင်းရှိရမည် ...
10 / 19 / 10 အပေါ် posted ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဂျက်ဆင်, က MS Duration: 22 / 10-17 / 17 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘဒေသခံအတွေ့အကြုံရှိထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်စတင်ရှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 10 / 19 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply တစ်ဦးအဖြစ်မှန်ရိုက်ကူးနှင့်အတူတစ်ဦးက New York အမှုထမ်းကူညီပေးဖို့အောက်တိုဘာ 19th ။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား Shoot နေ့စွဲများ: အောက်တိုဘာလ 19th အောက်တိုဘာလ 20th အောက်တိုဘာလ 21st အောက်တိုဘာလ 22nd တာဝန်ပါဝင်သည်ပေမယ့် ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်အမ်း Arbore, MI Duration:2ရက်, 10 / 20 / 10 အပေါ် posted စတင်သည် 17 / 17 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 10 / 20 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply တစ်ဦးမောင်းအဆင်ပြေဖြစ်ရမည် ဗန်။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်တစ်ဦးစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအတွက်ယခု Subscribe? >> ပိုအတွက် Sign ကျေးဇူးပြု.
ဒစ်ဂျစ်တယ် Imaging က Technician အ
10 / 19 / 10 အပေါ် posted ဒစ်ဂျစ်တယ် Imaging က Technician အကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်စန်း Juan, Puerto Rico Duration: 28 / 11-6 / 11 OR 10 / 10-17 / 17 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 10 / 19 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့်မဟုတ် Apply အဆိုပါစန်း Juan ဧရိယာမှဒေသခံတစ်ဦး DIT ရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့3ရက်ပေါင်း 10 / 19-10 / 28 OR 11 / 6-11 / 10 ဖြစ်စေများအတွက်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စတိုင်ရှိုးရိုက်ကူးပါတယ်။ ကျနော်တို့အပေါ်ရိုက်ကူးပါလိမ့်မယ် ...
53 ၏စာမျက်နှာ 105«ပထမဦးစွာ...304050«5152535455 » 607080...နောက်ဆုံး»